Ukuthula. Yiziphi izizathu zokushaja abesifazane isembozo sekhanda \_ - Rabi Michael Avraham
Ukuthula. Yiziphi izizathu zokushaja isigqoko sabesifazane \_
Izimpendulo > Isigaba: I-Halacha > Ukuthula. Yiziphi izizathu zokushaja isigqoko sabesifazane \_
Israyeli Ubuzwe eminyakeni engu-4 edlule
Ukuthula. Eceleni kwengxoxo mayelana nokumbozwa okuhle kwezinwele zekhanda lowesifazane, bheka isidingo 1, ngabona ukuthi u-Amos Bracha ushicilele ukuthi encwadini yakho kuye wabhala "ukuthi imvume ngokwayo inendawo" (kodwa hhayi nhlobo ngezizathu zikaRabi Mashash). Kanye namaJapane ngendatshana yakho engenhla.
Ngemva kokubukeza, mhlawumbe ungangiqonda lapho esihlokweni sakho lapho, noma nhlobo, ubhale izizathu?
Ukuze uthole incwadi yakho bheka okuthi google.com/view/minagshelkishot Izibuyekezo
Futhi siyakuhalalisela encwadini yakho.
Omaka bombuzo: Isigqoko sekhanda
Angizibhalanga izimpikiswano ngoba kwakungeyona indaba okwakuxoxwa ngayo. Lesi sihloko sasikhuluma ngezimpikiswano zikaRabi Mashash.
Konke kubunjiniyela. Yini ehambisana nazo zonke izinhlobo zokubala '?
Indaba Vuliwe Ingabe iLehavah iyinhlangano ecwasa ngokwebala? (Ikholomu 484)
umuntu Vuliwe Ingabe iLehavah iyinhlangano ecwasa ngokwebala? (Ikholomu 484)
Isamishi likakotapheya Vuliwe Impendulo yokubaluleka kwefilosofi embuzweni wokuthi kungani sikholelwa
Yebo Vuliwe Phendula okhethweni